बिहे गरेको ६ महिनामै जब श्रीमानले १३ बर्षिय श्रीमती रीतालाई बारीमा छोडेर आफ्नै कोठामा गएर झुन्डिएर आत्महत्या गरे ! – Etajakhabar
बिहे गरेको ६ महिनामै जब श्रीमानले १३ बर्षिय श्रीमती रीतालाई बारीमा छोडेर आफ्नै कोठामा गएर झुन्डिएर आत्महत्या गरे !
ओखलढुंगा – गत वर्षको असोज महिनामा रीता गजमेरको मोबाइलमा अपरिचितको फोन आयो। फोन उठाइन्, बोलिन्। नचिनेको मान्छे भएकाले रङ नम्बर भनेर फोन काटिन्। त्यसपछि त्यही नम्बरबाट दैनिक फोन आउन थाल्यो। सुरुसुरुमा धेरै कुराकानी नभए पनि पछि फोनमै चिनजान भयो। उनलाई फोन गर्ने सुनिल विक रहेछन्। रीता र सुनिलबीच कुराकानीको क्रम लम्बिन थाल्यो। रीताले सुनिलसँग कुरा गर्ने क्रम बढाइन्। नागरिक न्युजमा खबर छ । ६ महिनापछि फोनमा कुराकानी हुने सुनिलसँग उनको भेट भयो। २०७५ वैशाख ६ गते रीताकै गाउँमा एक आफन्तको विवाहमा सुनिल जन्त आएका बेला उनीहरुको भेट भएको हो। ६ महिनासम्म फोनमा मात्र कुराकानी हुने उनीहरुको यो पहिलो भेट थियो। फोनबाटै एकअर्कालाई मन पराउन थालेका रीता र सुनिलले पहिलो भेटपछि विवाह गर्ने निधोमा पुगे।
उनीहरुले वैशाख १३ गते मानेभन्ज्याङ बजारबाट भागेर विवाह गरे।विवाह गर्दा सुनिल १७ र रीता १३ वर्षका थिए। सुनिल एसइईको परीक्षा दिएर बसेका थिए भने रीता कक्षा ८ मा पढ्दै थिइन्। उनीहरुले विवाह गरेको दुई दिनपछि मात्र रीताको घरमा थाहा भएको रीताकी आमा तिजमायाले बताइन्। ‘छोरी घर आइन, दुई दिनसम्म गाउँ, खोला, खोल्सा, जंगलतिर खोजियो, प्रहरीमा पनि जानकारी गरियो’, उनले भनिन्, ‘दुई दिनपछि आफन्तमार्फत छोरीले बिहे गरेर गएको थाहा भयो।’ रीताको उमेर कलिलै भएकाले छुट्ट्याउन खोजियो तर उनीहरुले आत्महत्या (दुर्घटना) गर्नेे डरले केही नगरिएको रीताका बुवा गमबहादुरले बताए।
विवाहपछि रीताको उमेर सानो भए पनि ठूलै जिम्मेवारी आइलाग्यो। बिहान चाँडै उठ्नु, घर सफा गर्नु, जाँतो चलाउनु, घाँस काट्नु उनको दैनिकी बन्न थाल्यो। ‘माइतमा धेरै काम गर्नुपर्दैनथ्यो। आमाले कहिलेकाहीं सानोतिनो काम लगाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ,‘मैले कहिल्यै माइतमा जाँतो पिसेको थिइन्। विवाह गरेपछि पिस्नुपर्‍यो। जाँतो घुमाउँदा फेरो पुग्दैनथ्यो, मुडामा बसेर पिस्थें।’
घरमा कामको दुःख भए पनि सुनिल र उनको सम्बन्ध राम्रै थियो। गत असोज ३ गते सुनिल र उनीसँगै बारीमा घाँस काट्न गएका थिए। रीतालाई बारीमै छोडेर सुनिल घर फर्किए। घर आएर उनी बाली उठाउन गाउँ जानुपर्ने थियो। एक घन्टापछि रीता घाँस लिएर घर फर्किंदा उनीहरु सुत्ने कोठाको ढोकामा भित्रबाट चुकुल लगाइएको थियो। बाहिरबाट बोलाइन्, भित्रबाट आवाज आएन। ‘ढोकाको भित्रबाट चुकुल लागेको थियो, मैले बोलाएँ, कोही बोलेनन्’, उनले भनिन्, ‘तर झ्यालबाट जान सकिने थियो। गएर हेर्दा सुनिलले झुन्डिएर आत्महत्या गरिसकेका रहेछन्।’
श्रीमान्को मृत्युपछि घरमा जम्मा भएकामध्ये उनलाई सहानुभूतिभन्दा पनि ‘कस्ती अलच्छिनी रहिछ ? यो उमेरमै श्रीमान् खाई’ भन्ने आरोपसमेत सहनु परेको उनले बताइन्। रिता र सुनिलको विवाह दर्ता भएको छैन। कानुनअनुसार उनीहरुको विवाह भएको देखिँदैन तर सामाजिक रूपमा उनीहरुको विवाह भइसकेको छ। कानुनअनुसार रीता एकल हाेइनन् तर सामाजिक रुपमा उनी १३ वर्षमै एकल भएकी छिन्। पतिको मृत्युपछि रीता माइत फर्केर कक्षा ८ मा पढ्न थालेकी छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०७५ समय: ९:५९:१४
पूर्वराजाले खोसे सहारा: आफ्नो गाडीको ठक्करले मृत्यु भएका हेम र प्रकाशका परिवारलाई सान्त्वना समेत दिएनन्
आज तेह्रौं लोकतन्त्र दिवस : राजाको सत्ता जनतामा आएको दिन , देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदै
३१ वर्षीय भुवन कामगर्दागर्दै बिजुलीको पोलमा झुण्डिए, भयो यस्तो दुखद निधन
श्रीमतीले टचर दिएको भन्दै ललितपुरमा श्रीमतीको टाउको काटेर बोकेर हिडे यी श्रीमानले
नेपाल प्रहरीद्वारा २२ हजार दरबन्दी थप्न माग
मकवानपुरमा सवारी दुर्घटनामा परी ५१ जनाको ज्यान गयो
१७ सेकेन्ड अगाडि
किन आए पुर्वका भाइरल जोडी अचानक काठमाडौंमा ? (भिडियोसहित)
नातीसँगै बाढीले बगाएका हजुरबुवा बाँचे तर नातीको गयो ज्यान ,शोकमा परिवार